Ananda 4G+ Network Operator Business Transfer Announcement | IGE Group
Amara Communications Co., Ltd. is holding the 2600MHz Spectrum License awarded by Ministry of Transport and Communications for winning the auction with the bid value of over USD 120 million.Since 2018, Amara is providing Ananda Wireless Broadband 4G+ Network Operator in Yangon and Mandalay.
In addition to providing WBB connection, Amara Communications aims to provide different other digital technology services, to expand the 4G+ network operations across Myanmar, and to effectively collaborate with local and international partners. Moreover, the positive changes are thoroughly
implemented in the organization with an objective to expend the business of technology.
Aung Toe,a22-year-old young talented entrepreneur with solid understanding of the technology challenges and digital future opportunities, confidently proposed to take over Ananda 4G+ Network Service Business just before the COVID-19 pandemic started in 2020. His proposal comes from in-dept analysis on the potentiality of the business in different crucial aspects, such as his own work experience, financial and business feasibility, technological expertise, and market requirement and competition. Aung Toe hasadream of working to build the Digital Myanmar Society. He sets his goals high but realistic, while he also always pursues them with short-term and long-term objectives and plans. Based on his expertise in technology and business, he has successfully established IT related businesses in India and the US within an impressively short period of time.
After carefully evaluating his high-quality proposal along with his best-intended goals, relentless efforts, unparalleled ambitions, and his proven ability to transform the business and its value into full potential, Amara Communications has decided to transfer its technology business, Ananda, to Aung Toe.
Henceforth, Aung Toe, with the vision and drive to digital transformation for all-inclusive ecosystem,will take over and strategically lead Ananda 4G+ Network Operator as the Board Chairman of Amara Communications Co., Ltd, who has the absolute power for strategic direction and decision making of the business matters.
The transfer of controlling interest (Share Transfer) of Amara Communications is agreed in principle.However, the formal transaction is yet to be completed by obtaining the necessary regulatory approvals. The details of the transaction will be disclosed upon completion.
Ananda 4G+ Network Operator လုပ်ငန်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ကြေညာချက်။
ဇန်နဝါရီ (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်။
Amara Communications Co., Ltd. သည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ 2600 MHz လှိုင်းနှုန်းစဥ် အသုံးပြုခွင့် လိုင်စင်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၁၂၀) ကျော် ပေးသွားပြီး လေလံစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ananda 4G+ Network Operator လုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ပြီး WBB ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၎င်းအပြင် အခြားနည်းပညာဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးကိုတိုးချဲ့ပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ကွန်ယက်တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားရန်၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် စသည့် လျာထားချက်များ ထားရှိဆောင်ရွက်ပါသည်။ နည်းပညာကဏ္ဍတွင် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် စွန့်ဦးတီထွင် အိုင်တီနည်းပညာလုပ်ငန်းရှင် ၂၂ နှစ်အရွယ် လူငယ်တဦးဖြစ်သည့် ကိုအောင်တိုးမှ လုပ်ငန်းအလားအလာကို သုံးသပ်၍ ananda 4G+ Network Operator လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းရယူလိုကြောင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်း ကိုဗစ်ကာလမတိုင်မီကပင် စတင်၍ ရဲဝံ့စွာကမ်းလှမ်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကမ်းလှမ်းဆွေးနွေးမှုကို ၎င်း၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ငွေကြေးနှင့် စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်မှု၊ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ယှဥ်ပြိုင်မှု စသည့် ရှုထောင့်မျိုးစုံမှ သုံးသပ်၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကိုအောင်တိုးသည် Digital Myanmar လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တခု ဖန်တီးပေးရန် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသည့် လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မြင့်မားပြီး ဖြစ်တန်စွမ်းရှိသည့် ရည်မှန်းချက်များ ထားရှိ၍ လုပ်ငန်းတိုင်းကို ရေတို ရေရှည် စီမံချက်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ အိုင်တီနည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှုများကို အခြေခံ၍ အိန္ဒိယနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံများတွင် နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး အချိန်တိုတိုအတွင်း အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၎င်း၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မားမှု၊ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစား အားထုတ်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အလားအလာစသည့် အသေးစိတ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်၍ နည်းပညာလုပ်ငန်းကို အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့် လူငယ်သို့ လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရန် အပြည့်အဝရှိသည့် ကိုအောင်တိုးမှ Amara Communications Co., Ltd. ၏ Board Chairman အဖြစ် ananda 4G+ Network Operator လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းရယူ၍ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်မှု အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းပေးခြင်း (Share Transfer) သဘောတူညီမှုများ ရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များရယူရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအရ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။